केपी ओलीले जनता ढाँटेपछि कांग्रेस प्रवेशको ओइरो, नेकपामा बसिरहन कार्यकर्तालाई लाज ! – Khabar Silo
केपी ओलीले जनता ढाँटेपछि कांग्रेस प्रवेशको ओइरो, नेकपामा बसिरहन कार्यकर्तालाई लाज !
कैलाली – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका जनतालाई रेलदेखि पानीजहाजसम्मका गफ दिएका थिए ।
वृद्धवृद्धालाई मासिक पाँच हजार वृद्धभत्ता दिने आश्वासन दिएर भोट मागेको भएपनि दुई पटक बजेट ल्याइसक्दा वृद्धभत्ता पाँच हजार पुगेको छैन । पाँच हजार वृद्धभत्ता पुर्‍याउने भनेर गाउँगाउँमा भोट भाग्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता कार्यकर्ता अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका कारण लज्जित महसुस गरिरहेका छन् ।
केपी ओलीले खुलेआम जनता ढाँटेपछि लज्जित भएका नेकपा कार्यकर्ता लाज छोप्न नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरिरहेका छन् । कैलाली जिल्लाको धनगढी उपमहानगरपालिका–१९ कृष्णनगरमा नेकपा परित्याग गरी ६१ जनाले कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
शुक्रबार कृष्णनगरको नेपाली कांग्रेस वडा कार्यसमितिद्वारा आयोजित दिपावलीको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा ६१ जनाले नेकपा परित्याग गर्दै कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् ।
वडामा रहेको तटबन्ध, विद्युत् लगायतका समस्या हालसम्म कुनै निकायले समाधानको लागि सुनवाइ नगरेको र निर्वाचनका बेला गफ दिएर अहिले काम नगरेको भन्दै आफूहरू कांग्रेसमा प्रवेश गरेको नवप्रवेशीले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसको खबरदारीले मात्रै जनताको समस्या समाधान हुने आशा रहेको उनीहरूले बताएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति नृपबहादुर वडले कार्यक्रममा बोल्दै वडा नम्बर १९ मा रहेका समस्या समाधानको लागि आफू लागिपरेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस वडा नम्बर १९ का सभापति होमप्रसाद गौतम कार्यक्रमका सभापति थिए ।
काठमाण्डौ – मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, नेपालमा पश्चिमी न्युन चापीय प्रणालीको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै छ । यसैको प्रभावले मौसममा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गईहेको जानकारी दिएको छ । अहिले (शनिबार बिहान)देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षा र हिमपात भईरहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लागेको छ । काठमडौं उपत्यकालगायत देशका […]
काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसका नेता धनराज गुरुङले कृष्ण बहादुर महरा प्रकरणमा महिलाले बयान फेर्नु शंकास्पद रहेको बताएका छन्।बुधबार एक निजि रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदै गुरुङले पीडित महिलाको बयानको भिडियो बाहिर आएको एक दिन नबित्दै बयान फेरिएको विषयमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने बताएका हुन्। प्रमाणसहित मिडियामा आइसकेको र यसैको आधारमा महराले राजिनामा दिसकेको हुँदा गम्भीर भएर घटनाको अनुसन्धान […]
चिनियाँ बैंकका शाखा नेपालमा विस्तार गर्न दुई देशबीच समझदारी
काठमाडौं- नेपाल र चीनबीच चिनियाँ बैंकका शाखा नेपालमा विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा चिनियाँ बैंकका शाखा नेपालमा विस्तार गर्न नेपालले सहजीकरण गर्ने विषयमा समझदारी भएको हो। दुई देशबीचको व्यापार र लगानीमा सहजता ल्याउन चिनियाँ बैंकका शाखा नेपालमा विस्तार गर्न लागिएको उल्लेख छ। ‘दुई देशबीचको व्यापार […]
नेपाल टेलिकमको तिहार अफर, रिचार्ज गर्दा २० प्रतिशत बोनस